Hume City Council - Adeega dib u hagaajinta iyo Qashinka
You are here : Home > Soomaali > Adeega dib u hagaajinta iyo Qashinka
Waxaan bixinaa adeega ururinta qashinka/alaabta xumaatay dhammaan degenayaasha Hume. Bins ayaa waxaa bixiya Golaha guri kastaana wuxuu helaa biinka qashinka guryaha oo dhan 140 litir ( biinka yare e cagaaran) iyo biinka dib u hagaajinta 240 litir ( biinka cagaarka aadka ah ee balaaran). Haddii biinkaaga la xaddo, la waxyeeleeyo ama la waayo, fadlan naga soo wac 9205 2200.
Biinkee iyo maxay?
Biinkaaga qashinka waa biinka yar ee cagaaran waxaana loo isticmaalaa oo kaliya qashinka guud ee guriga oo ay ku jiraan:
Baaggaga balaastiga ah, baakadaha balaastiga ah iyo waxyaalaha lagu duubo
Dharka gaboobey, kabaha iyo go'yaasha
Digaasida jajaban, galaaska daaqada, muraayada iyo nalalka galoobka
Qashinka guud ee guriga, oo ay ka mid yihiin cuntooyinka soo hara
Isbuunyada iyo polystyrene
Alaabta lagu ciyaaro ee jajaban iyo neebiyada
Biinkaaga dib u hagaajinta waa biinka aadka u cagaaran ee balaaran iyo waxaa loogu talagalay oo kaliya alaabta dib loo hagaajinayo oo ay ka mid yihiin:
warqadaha, baakadaha, kartoonada casiirka iyo caanaha
dhalooyinka galaaska, joogaga galaaska ah, dhalooyinka balaastiga ( baaggaga balaastiga Maya)
weelasha cuntada, birta ama qasaaca almuuniyamka
qasaaca aerosol iyo warqadaha tareydka lagu xiro
Waa inaad ugu ridaa alaabta aad dib u gaajineyso si debecsan biinkaaga dib u hagaajinta - fadlan ha ku ridin baaggag balaastig maadaama boorsooyinka balaastiga aan dib u hagaajin lagu sameyn karin.
Adeega orgaanikada ah
Kharashyar, goluhu wuxuu bixiyaa adeega biinka orgaaniga laba dii toddobaadba waa ikhtiyaari ee loogu talagalay tuurida waxyaalaha cagaaran ee dhirta sida cawska la jaro, caloomo, waxyaalaha ka soo hadha khudaarta iyo furuutka, cawska iskii u soo baxa, laamaha yar yar iyo kuwa kale ( kani waa biinka casaanka aadka ah)
Maalmaha qashinka la ururiyo
Qashinkaaga guriga waxaa loo ururinayaa si toddobaadle ah alaabtaada dib loo hagaajinayana labadii isbuucba mar. haddii aad heysato biinka orgaanikada ah, kan waxaa la qaadaa toddobaadka ka duwan alaabtaada dib loo hagajiyo. Macluumaadka ku saabsan maalmaha la qaado waa la soo diraa dhammaadka sannad kasta. Isagoo kuu sheegaya maalmaha biinashaada la qaadayo iyo waxa lagu ridi karo biin kasta. Ka wac Golaha 9205 2200 si aad u hesho nuqulkaaga buugga macluumaadka haddii aadan heysan mid ama kala soo bax warqada Taariikhda waxyaalaha Xumaada.
Side baan ku helaa biin dheeraad ah ama biin balaaran?
Si aad u codsatid biin xajmigiisu balaaran yahay ama yar yahay ama mid dheeraad ah, buuxi foomka Codsiga Adeega Waste waxaanad noogu soo celisaa boosta, fakis ama keen mid ka mid ah Xarumaha Adeega Macaamiisha. Haddii aad jeclaan lahayd foomka Codsiga Adeega Qashinka in laguu soo diro naga soo wac 9205 2200.
Ururinta qashinka adag
Waxaan bixinaa dhammaan adeega qashinka adag oo bilaash ah ee guryaha Hume oo dhan. Tan micnaheedu waxaa weeye waxaan imaan karnaa gurigaaga waxaana qaadeynaa alaabta waa weyn ee aan geli karin biinka qashinka. Si aad u balansatid in lagaa qaado qashinka adag ee waaweyn ama inaad hesho wax saa'id ah, ka waca Golaha 9205 2200. ( Fadlan ogow, haddii dadkii hore ee ku jiray ay isticmaaleen intii aad xaqa u lahayd ee guri ahaan qashinka adag in lagaa qaado, waxaa laga yaabaa inaad sugto ilaa sannadka dambe ururinta qashinka adag).
Alaabta la aqbalo in la qaado waxaa ka mid ah:
-alaabta guriga, qalabka iyo alaabta lagu ciyaaro
-khadiifada, la laalaabey oo laysku xiray, alaabta guriga laga isticmaalo iyo mukeefyada.
Biraha xumaaday, qalabka iyo alaabta la adeegsado, oo ay ka mid yihiin alaabta baabuurta, mishiinka cawska lagu jaro, saqafka simida iyo biraha kale.
-jiingada galaaska ah, muraayada iyo muraayada gaadhiga
-dheriyada, mutuleelka iyo alaabta shiineyska ah joodariyada iyo sagxada hoose ee sariiraha
-noocyada baabuurta iyo deyrarka oo qayb qayb laysugu xirey.
Adeegyada waxyaalaha dhulka buuxinaya (Landfill) iyo xarumaha dib u hagaajinta.
Waxaan leenahay laba goobood oo alaabada xumaata lagu tuuro (tips) oo loogu talagalay deganayaasha iyo dadka booqashada ah, halkaas oo aad ku tuuri kartid qashinka guriga adoo lacag ujro ah iska bixinaya. Si kastaba ha ahaatee, ma ogeyd inaad sidoo kale ku tuuri karto alaabo fara badan oo dib loo hagaajin karo loona isticmaali karo si bilaash ah? Goobahan mid kasta oo ka mid ah, waxaad keeni kartaa alaabta guriga ama kiimikada jardiinka, rinjiga, taayarada, bayteriyada, waxyaalaha xumaada ee jardiinka sida laamaha iyo caleenta iyo xitaa birta la xoorayo.
Taleefanka: 9359 3813 saacadaha uu furan yahay: 8.00subaxnimo - 4.00galabnimo (7 maalmood)
Waa xiran yahay maalinta Anzac Day, Good Friday, Christmas iyo Sannadka Cusub.
Council Landfill (Tip) Sunbury, Riddell Road (Melways 361 D8)
Taleefanka: 9744 2974 saacadaha uu furan yahay: 8.00subaxnimo - 4.00galabnimo (7 maalmood)
Wuxuu xiran yahay Anzac Day, Good Friday, Christmas iyo Sannadka Cusub.
Maalmaha geedaha la shiido
Goluhu wuxuu ku qabtaa maalmaha geedaha la shiido oo bilaash ah baaggaga. Maalinta geedka la shiido waa markaad noo keeni karto laamaha geedaha ama kuwa yar yar si laguugo shiido. Guriga iyo jardiinkaaga ayaad u qaadan kartaa geedka la shiiday si bilaash ah, ama waad ka tegi kartaa.
Updated : 9:01 PM, 11 November 2010